Hey’adda Caafimaadka aduunka oo warbixin kasoo saartay Afrika ee la xiriirta Covid-19 – SATTA
Hey’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) waxay ku boorisay waddamada Afrika in ay qaadaan tillaabooyin wax ku ool ah oo lagu yareynayo halista caabuqa CoronaVirus iyadoo wadamada Afrika ay bilaaben dib u soo laabashada duulimaadyada, ganacsiga iyo isu socodka dadkooda.
Haey’adda Caafimaad Aduunka (WHO) qeybteeda Afrika ayaa soo werisay in cudurkan faafa awgeed 36 dal ay xireen xuduudahooda iyo safarada caalamiga ah.
Ilaa iyo hadda dalalka Cameroon, Equatorial Guinea, Tansaaniya iyo Zambia ayaa dib u bilaabay duullimaadyadii ganacsi. 15-ka wadan ee xubnaha ka ah Ururka Dhaqaalaha ee Galbeedka Afrika ayaa la filayaa inay hawadooda furmaan 21-ka July.
Seychelles ma lahayn kiis gudaha ah oo la isugu gudbiyo tan iyo bishii Abriil 6. Toddobaadkii la soo dhaafay 66 kiis oo cusub, ayaa laga helay.
Si dib loogu bilaabo safarka hawada ee caalamiga ah, WHO waxay ku talisay in waddamadu qiimeeyaan xaaladda cudurka faafa si loo go’aamiyo in joogtaynta xaddiddu ay ka miisaan badan tahay dhaqaalaha dib-u-furitaanka xuduudaha haddii, tusaale ahaan, uu jiro fiditaan baahsan ee fayraska.
“Waxa kale oo muhiim ah in la go’aamiyo in nidaamka caafimaadku ula tacaali karo xawli ku socda kiisaska kiisaska jira iyo kuwa sop kordho”
Wadamada afrika waxaa lagu booriyay inay lahaadaan habab ku habboon meelaha laga galo oo ay ku jiraan garoomada diyaaradaha